बालुवाटारमा अझै कुरो मिलेन,माओवादीद्वारा मन्त्री फर्काउने चेतावनी ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
बालुवाटारमा अझै कुरो मिलेन,माओवादीद्वारा मन्त्री फर्काउने चेतावनी ?
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा एकछिनअगाडि बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा मन्त्रिमण्डल बिस्तारवारे अझै कुरो मिलेन । आजको बैठकमा भदौ २ गते जारी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशलाई कसरी टुंग्याउने भन्नेबारेमै छलफल केन्द्रित रहेको बताइन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अस्ति शुक्रबार उक्त अध्यादेशको बारेमा एक किसिमले बोलिसकेकाले मन्त्रिमण्डल बिस्तारबारे आजै टुंग्याउनुपर्ने नेताहरुको माग थियो । तर प्रधानमन्त्री हिच्किचाएपछि उहाँहरु पनि अप्ठेरामा पर्नुभएको छ । आज बैठकमा नेताहरुले कुन कुन मन्त्रालय कुन पार्टीलाई र तिनका को कोले सपथ ग्रहण गर्ने भन्नेबार छिट्टै टुंग्याउँ भन्दा प्रधानमन्त्रीले ‘अहँ’ भन्नुभएको थियो ।
‘पश्चिमतिरको एउटा ज्योतिषले देउवालाई असोज महिना यस्तै तरिकाले कटाउनुस् भनेकाले मन्त्रिमण्डल बिस्तारमा आलटाल गर्नुभएको आशंका छ ।’